News - ဘာကြောင့်ရေစုပ်စက်၏အပူချိန်ကအရမ်းမြင့်ပြီးဘာကြောင့်လဲ
၁။ ရေစုပ်စက်ကိုကွေးခြင်း (သို့) လွဲမှားစွာညှိခြင်းကရေစုပ်စက်ကိုတုန်ခါစေပြီးအပူဖြစ်စေသောသို့မဟုတ် ၀ တ်မှုဖြစ်စေသည်။
၂။ axial တွန်းကန်အားတိုးမြှင့်မှုကြောင့် (ဥပမာ၊ ရေစုပ်စက်ရှိချိန်ခွင် disc နှင့် balance ring အလွန်အမင်းဝတ်ဆင်သည့်အခါ) bearing ၏ axial load သည်တိုးလာပြီး bearing ကိုအပူဖြစ်စေသည်သို့မဟုတ်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ။
3. အမှုန်အမွှားအတွက်ဆီလောင်စာဆီ (အမဲဆီ) ၏ပမာဏမလုံလောက်သို့မဟုတ်အလွန်အကျွံဖြစ်ပါသည်, အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းခြင်း, အပျက်အစီးများ, သံတံသင်နှင့်အခြားအပျက်အစီးများရှိပါတယ်: ရေနံပျက်စီးမှုကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံလျှော bearing ကိုလှည့်မရ, ၀ ိုင်ကိုဆီသို့ယူဆောင်။ မရပါ။
4. အံကိုက်ညီရှင်းလင်းရေးလိုအပ်ချက်များကိုမကိုက်ညီပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အတွင်းပိုင်းလက်စွပ်နှင့်ရေစုပ်စက်၏ ၀ တ်မှု၊ အတွင်းပိုင်းလက်စွပ်နှင့် ၀ ိုင်အကြားကိုက်ညီမှုများလွန်းခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်တင်းကျပ်လွန်းခြင်းရှိလျှင်၎င်းသည် ၀ န်းကျင်ကိုပူနွေးစေနိုင်သည်။
5. ရေစုပ်စက် rotor ၏တည်ငြိမ်သောချိန်ခွင်သည်မကောင်းပါ။ ရေစုပ်စက်၏ရေဒီယိုစွမ်းအင်တိုးပွားလာခြင်းနှင့် ၀ န်ထုပ်ဝန်ထုပ်များတိုးပွားလာခြင်းကြောင့် ၀ န်ကြီးများသည်အပူပေးသည်။
၇။ အပူအအေးကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအများအားဖြင့်အမှုန်များပျက်စီးသွားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပုံသေ roller bearing သည်ပျက်စီးနေဆဲဖြစ်သည်၊ သံမဏိဘောလုံးသည်အတွင်းပိုင်းလက်စွပ်ကိုနှိပ်နယ်ခြင်းသို့မဟုတ်အပြင်ဘက်လက်စွပ်ကိုချိုးဖျက်ခြင်း၊ အဆိုပါလျှော bearing ၏အလွိုင်းအလွှာကိုချွတ် peels နှင့်ချွတ်ကျရောက်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်, ဝက်ဝံမှာအသံပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ပြီးဆူညံသံကျယ်သောကြောင့်ဒီတော့ဝက်ဝံစစ်ဆေးမှုများအတွက်ဖြုတ်နှင့်အချိန်မီအစားထိုးသင့်ပါတယ်။
၁။ installation အရည်အသွေးကိုဂရုပြုပါ။
post အချိန်: အောက်တိုဘာ -24-2020